XOG:- Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid oo wata qorshe uu xilal ugu soo magacaabayo shaqasiyaad ay isku beel yihiin – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid oo wata qorshe uu xilal ugu soo magacaabayo shaqasiyaad ay isku beel yihiin
Ilo xog-ogaal ah aynu ka heleyno xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke uu hataan ku howlan yahay inuu xilal cusub usoo magacaabo shaqsiyaad ay isku beel yihiin.
Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid oo muddooyinkii ugu dambeysay ku mashquulsanaa arrimahaan ayaa u muuqda mid ka faa’ideysanayaa xilliga kala guurka ah oo ay soo dhawdahay doorashooyinka dalka islamarkaana uu waqtiga kasii dhamaanayo dowladda federaalka ee haatan dalka ka jirta.
Dhinaca kale, dhawaan ayay ahayd markii uu ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid xil u magacaabay guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Xasan Xuseen Muungaab, kaas oo loo magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid ayaa maalmaha soo socdo la filayaa inuu soo saaro wareegto uu xilal ugu magacaabayo shaqsiyaad ay isku beel yihiin isaga, waxaana wareegtadaasi isku dayi doonnaa inaa idiin soo gudbino Insha Allaah.
DIGNIIN:- Fadlan ilaali xuquuqda xogta